कस्ले बेच्यो लायन्स क्लब बेलबारीको एम्बुलेन्स ? - Purbeli News
प्रकाशित मिति: सोमबार, आषाढ २२, २०७७ समय: १२:३०:३६
बेलबारी / लायन्स क्लब अफ बेलबारीको नाममा बर्षौअघि राजश्व छुटमा आएको एम्बुलेन्स बिक्री गरिएको खुलासा भएको छ ।
लायन्स क्लब बेलबारीको नाममा आएको एम्बुलेन्स तत्कालीन प्रेसिटेन्ट योगेन्द्र सुवेदीको पालामा मोरङको लेटाङका एक ब्यत्तिलाई सुवेदी सहित अन्य पदाधिकारीहरुले बिक्री गरेको पाईएको छ । एम्बुलेन्स बिक्रीको बिषयमा सुवेदीले ब्यबस्थापन गर्न कठिनाई भएका कारण एम्बुलेन्स बिक्री गरेको स्वीकार गरे । संस्थाको एम्बुलेन्स बिक्री गर्न नपाईने भएका कारण एम्बुलेन्स लायन्सकै नाममा रहेको छ । तरपनि तत्कालिन समयमा १० लाख रुपैया लिएर एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्ने जिम्मा अर्कै ब्यत्तिलाई दिईएको पाईएको छ ।
हाल लायन्सको प्रेसिडेण्ट खेम गौतम र सचिव तिर्थ सिग्देल रहेका छन । सिग्देलले संस्थाको नाममा आएको एम्बुलेन्स बिक्री हुनु दुःखद भएको र एम्बुलेन्स फिर्ताको लागि पहल शुरु भएको बताए । एम्बुलेन्स बिक्रीका बारेमा आफुलाई जानकारी नभएको पुर्व प्रेसिडेन्टहरु शिव बराल र राजकुमार लिम्बुले बताए ।
को को हुन लायन्सका पुर्व प्रेसिडेन्टहरु ?
लायन्स क्लब अफ बेलबारीको संस्थापक प्रेसिडेन्ट हाल बेलबारी नगरपालिकाका मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदी हुन । त्यसपछि बेलबारीका हालका प्रबत्ता योगेन्द्र सुवेदी, बेलबारी गाबिसका पुर्व अध्यक्ष शिव बराल, नेपाली काँग्रेसका जिल्ला सदस्य राजकुमार लिम्बु, शिक्षक तथा सहकारीकर्मी हरि सुवेदी, ब्यबसायी हेमन्त सुवेदी, ब्यबसायी कमल श्रेष्ठ र हाल ब्यबसायी खेम गौतम अध्यक्ष रहेका छन ।
लायन्स क्लबको पछिल्लो अबस्था
केही बर्ष यता लायन्स क्लब बेलबारी धराशायी बन्दै गएको छ । अन्तराष्ट्रिय संस्थाको हालत स्थानीय क्लबहरुको भन्दा कमजोर देखिन्छ । संस्थाको सम्पत्तिका रुपमा रहेको एम्बुलेन्स समेत बिक्री भईसकेको र हाल संस्थाको लेटरप्याड समेत नभएको र एउटा संस्थाको छाप मात्र रहेको छ । केही दिनअघि भएको एक कार्यक्रममा संस्थाको सम्पत्ति भन्दै पुर्व अध्यक्षले बर्तमान अध्यक्षलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । संस्था एकदमै धराशायी बनेपछि संस्थालाई अब मजबुत बनाएर जाने बर्तमान प्रेसिडेण्ट गौतम बताउँछन ।